Ndị na-elekọta mmadụ | Martech Zone
Echere m na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eleba anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka a ga - asị na ọ bụ ụdị ọhụụ. Ekwetaghị m na ọ bụ. N’oge a na-eme onyonyo, anyị na-eji ọkwa akụkọ ma ọ bụ onye na-eme ihe nkiri tụnye ndị mmadụ ihe. Netwọk atọ ahụ nwere ndị na-ege ntị ma nwee ntụkwasị obi na ikike guzobere… yabụ amụrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi azụmahịa.
Ọ bụ ezie na mgbasa ozi mmekọrịta na-enye ụzọ abụọ iji kwurịta okwu, ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ka bụ ndị na-emetụta otu ụzọ. Ha nwere ndị na-ege ntị, ọ bụ ezie na ha pere mpe ma bụrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ isiokwu dị na ya. Maka ndị ahịa, nsogbu ahụ bụ otu ihe ahụ. Onye na-ere ahịa na-achọ ị nweta ahịa ma nwee mmetụta na-emetụta ma nwekwa ahịa ahụ. Dị ka ụlọ ọrụ si zụta ndị mgbasa ozi ma nwee ọnụ na-ekwuchitere ha, anyị nwere ike ime otu ihe ahụ na ndị na-emetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ihe omuma a site na MBA na Azụmaahịa na-ekwu maka otu mmadụ ga - esi chọta ma jiri ya mee ihe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Amaghị m na m kwenyere n'okwu ahụ Ndị na-emetụta Mega n'ime infographic, ọ bụ ezie. Kama, m ga-akpọ ndị ahụ elekọta mmadụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ influencers. A ka nwere isiokwu ndị akọwapụtara nke m tụkwasịrị obi na ndị ikike ahụ… mana ọ bụghị ha niile. M ga-atụkwasị obi Gary Vaynerchuk na mmanya na entrpreneurship, Scott na ụgbọala, na Mari na Facebook Marketing… mana Agaghị m atụkwasị ha obi na-eme ndokwa m ngwaahịa Pọtụfoliyo!
Tags: Ann Handleybrian solisChris brogangary vaynerchukGuy kawasakiinfographiceziokwuMari Smithrobert na -ekwu okwuscott egoseth godinndị na-elekọta mmadụ